Xukuumadda oo lagu Ammaanay Bixinta Dhaqaalaha Doorashooyinka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xukuumadda oo lagu Ammaanay Bixinta Dhaqaalaha Doorashooyinka
Qore: Maxamuud Walaaleeye
Hargeysa:-Saaxiibada caalamiga ah ee taageera geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland ayaa soo dhaweyey iclaaminta maalinta la qaban doono doorashooyinka baarlamaanka iyo goleyaasha deegaanka.
Qoraal shalay ka soo baxay safaaradda Ingiriiska, oo ay ku asaxeexnaayeen dublamaasiyiinta dalalka Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, Midowga Yurub iyo Maraykanka, ayaa lagu sheegay in doorashooyinku fursad weyn u yihiin in Somaliland dib u xaqiijiso geeddi-socodka dimuqraadiyadda.
“Waxaan ku bogaadineynaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka iyo saddexda xisbi siyaasadeed sida ay ugu guuleysteen dhammaystirka hannaanka diiwaangelinta cod-bixiyaha oo hufan.
Saaxiibadda caalamiga ah ee taageera Somaliland ayaa ammaanay hannaanka dhallinyaradu uga qeybqaadatay diiwaangelinta.
“Waxaannu u kuur-galnay isla markaana soo dhaweynay tiro badan oo dhallinyaro wiilal iyo gabdho isugu jira oo daafaha Somaliland isaga diiwaangeliyay inay codeeyaan markii ugu horreysay.
Waxaan ku dhiirrigelinaynaa dawladda iyo xisbiyada siyaasadeed inay sii wadaan hubinta in musharrixiinta heerarka kala duwan oo keliya aan lahayn astaamo shaqsiyadeed oo ay ku fuliyaan doorka looga baahan yahay ee ay sidoo kale runtii matalayaan kala duwanaanshaha gudaha ee Somaliland.
Waxaan soo dhoweyneynaa ballanqaadkii 3-da Sebtember 2020 ee ay kala saxiixdeen saddexda xisbi siyaasadeed si wad jir ah “usoo magacaabaan 18 haween ah oo musharrixiin ah” iyo “saddex murashax oo ka socda beelaha laga tirada badan yahay” doorashooyinka baarlamaanka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay inay sugayaan heshiisyo xukuumada iyo xisbiyadu gaadhi doonaan,
“Waxaan sugeynaa heshiiska Xeerarka anshaxa doorashada ee xisbiyada iyo warbaahinta. Waxaan rejayneynaa in labada heshiisba ay ka turjumaan muhiimada daahfurnaanta ee magacaabista musharraxiinta, goob loo siman yahay oo loogu talagalay ololeynta, ka hortagga cabsigelinta ama dhibaataynta, oo ay ku jiraan badbaadada haweenka musharrixiinta ah.
Waxaan weli naga go’an inaan la shaqeyno Somaliland si aan u taageerno qabashada doorashooyin hufan oo amni leh. Waxaan ku bogaadinaynaa dawladda Somaliland inay bixiso inta badan dhaqaalaha ku baxa doorashooyinkaas.
Beesha caalamku waxay siisay Komishanka Doorashooyinka taageero dhaqaale oo ku saabsan wajiga diiwaangelinta codbixiyeyaasha. waxaan rejayneynaa inaan bixinno taageero dheeri ah oo maaliyadeed iyo mid macnawi ah heerarka hadhay ee howlaha doorashada.
Previous articleSpiegel :Somaliland Waa Mucjisada Geeska Afrika”
Next articleKa Hor inta Aanad Shaqo Xaraysan Maxaad U Baahan Tahay?
Maxaa ka soo Baxay Kalfadhigii saaka ee Golaha Guurtidda?
Mareykanka Oo War Kasoo Saaray Duqeyn Ka Dhacday Buuraha Golis